Sucuudiga Oo Qirtay Dilka Wariye Jamaal Kaashogji+Taariikh Nololeedkiisa - News WordPress theme
Ishabaydhaba NewsWARARKASucuudiga Oo Qirtay Dilka Wariye Jamaal Kaashogji+Taariikh Nololeedkiisa
Sucuudiga Oo Qirtay Dilka Wariye Jamaal Kaashogji+Taariikh Nololeedkiisa
Waa markii ugu horreysay uu Sucuudiga ku qirto inuu ka dambeeyay dilka weriye Jamaal Kaashogji.
Jamaal Kaashogji waxaa dad ugu war dambeysay labadii bishan xilli uu waraaqo kasoo qaadanayay qunsuliyadda Sucuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul.
Sannadahaa uu ka maqnaa shaqada weriyenimo ee u dhaxaysay labadaa goor Kaashogji dalka wuu ka baxay oo wuxu la taliye dhanka warbaahinta ah u ahaa Amiir Turki Al-Faysal, taliyihii hore ee sirdoonka, oo markaa laga dhigay danjiraha Sucuudiga u fadhiya Ingiriiska markii dambena Maraykanka.
laakiin isla markii uu hawada galayba, telefishankii cusbaa ee uu Kaashogji hogaanka u hayey waa la xidhay oo waxa lagu qoonsaday waraysi uu la yeeshay shakhsi mucaarad ku ah Baxrayn.
Markii uu bilaabmay kacdoonkii Carabtu, Kaashogji wuxu la saftay mucaaradkii doonayey in dalalka Masar iyo Tunisia isbedel ka hirgalo.
Bishii Diisember 2016-kii markii dhaxal sugaha taajka boqortooyadu doonayey inuu xidhiidh fiican la yeesho madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo markaas uun la doortay, ayaa la sheegaa in Kaashogji aad u dhaliilay xidhiidhkaa.
Kaashogji waxa kale oo uu aad ugu dhaliilay xukuumadda Sucuudiga go’aankii ay xidhiidhka ugu jartay Qatar, waxaanu ku tirtirsiyay Boqoortooyada in ay la safato Turkiga oo ay xulufo yihiin Qatar marka ay timaad siyaasadaha gobolka.
[Kaashogji oo ka hadlaya hab dhaqanka Maxamed Bin Salmaan ayaa wuxu qoray] “Waxaan gurigaygii, qoyskaygii iyo shaqadaydiiba uga firxaday waa in aan aragtidayda cabiray” waxaanu intaa ku daray “in aan waxa jira ka aamusaana waxay ila noqontay in aan khiyaamaynayo dadka jeelka ugu jira xorriyadda hadalka. Haatan waan hadli karaa oo waxaan haystaa fursad aanay dad badani haysan”.